အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Download - Caller ID ကို & Block ကိုအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ » အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် - Caller ID ကို & Block
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် - Caller ID ကို & Block ကို APK ကို
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကိုအကောင်းဆုံးကိုခေါ်ဆိုသူ ID App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်မသိသောနံပါတ်တစ်ခုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ကူညီပေးသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖုန်းနံပါတ်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူ, အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကို calls.ALO Caller ID ကို & Block ကိုနှောင့်ယှက်ဖို့နှုတ်ဆက်ပြောလွယ်ကူသောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လမ်းမဆို In-app ကိုဝယ်ယူမှုမရှိဘဲလုံးဝကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်ထောက်ပံ့
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကို Multi-lingual ဖြစ်တယ်, သင်သွားလေရာရာ၌ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖုန်းနံပါတ်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူ, သင်ကသုံးနိုငျ!
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကိုအစားမသိရနံပါတ်များစစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုမှု ID ပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်သင်အမြဲသင်တက်ကောက်မတိုင်မီတောင်းဆိုသူကိုသိနိုငျသညျ။
- အမည်များ, အမျိုးအစားများ, နံပါတ်များ, လိပ်စာများနှင့်အော်ပရေတာအပါအဝင်အပြည့်အဝဆက်သွယ်ရန် ID ကိုအချက်အလက်, ပြပါ။
- မြန်ဆန်ဖုန်းနံပါတ်အသိအမှတ်ပြုမှု: app ကိုတစ်စက္ကန့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုမှု function ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
★ blocker Call - နာမည်ပျက်စာရင်း
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကိုချက်ချင်းအမည်ပျက်စာရင်းအပေါ်နံပါတ်များကိုအပေါ်ကိုတက်ဆွဲထားနိုင်သည့်စုံလင်သောခေါ်ဆိုခ blocker ဖြစ်ပါသည်။ ရုံအမည်ပျက်စာရင်းမှနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ငါတို့သည်အရာကြွင်းလေသမျှလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။
- အလိုအလျောက် spam များကို blocker: Block ကိုသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ထဲမှာမဖြစ်ကြောင်းဘုံနံပါတ်များ, ဝှက်ထားသောနံပါတ်များ, ပင်လယ်ရပ်ခြားနံပါတ်များ, နှင့်နံပါတ်များထံမှတောင်းဆိုထားသည်။
- Block ကိုအလွယ်တကူခေါ်ဆို: ဒါဟာ spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့တစ်ဦးတည်းသာကလစ်ကြာ, သို့မဟုတ်သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမည်ပျက်စာရင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
- စိတ်ကြိုက်အမည်ပျက်စာရင်း: သင့်ဟောင်း, ကြွေးမြီစုဆောင်းနှင့် salespeople အပါအဝင်အမည်ပျက်စာရင်းမှမဆိုနံပါတ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
★သမိုင်း Scan ကို Call - သင်သည်အစဉ်အသင့်ခေါ်ဆိုမှုသမိုင်း check လုပ်ထားအံ့ဩဖူး: ငါ့ကိုခေါ်တော်မူသော? အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကိုသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးရန်တိုင်းအမည်မသိခေါ်ဆိုမှုစိစစ်သည်။
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Caller ID ကို & Block ကို Download လုပ်ပါကမြန်ဆန်လွယ်ကူသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖော်ထုတ်ပိတ်ဆို့ဖို့စေသည်!
YENİ! Gelen Aramaic tanımlamakutucuğunu kapatmak için telefonu biraz sallamanız yeterli giden ့! ဘူစမ်းသပ်aşamasındadırözellik။ sorunlarıYaşadığınız, isteklerinizi hoşunuza gitmeyen herşeyi alocallerid@gmail.com adresine iletebilirsiniz ့။
15.93 ကို MB
Caller ID ကို Software များ